Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.2 Human computation
Mamiropu ekuverengera kwevanhu anotora dambudziko guru, anoritora kuita zvidimbu zviduku, kuvatumira kune vashandi vakawanda, uye ozobatanidza mhinduro.
Mapurogiramu ehuwandu hwevanhu anobatanidza miitiro yevanhu vazhinji vanoshandira michina yakawanda kuitira kuti vagadzirise zvinetso zvisingakoshi zvikuru kune mumwe munhu. Iwe unogona kuva nechinetso chekutsvaga chakakodzerwa nekuverenga kwevanhu kana iwe wakambofunga kuti: "Ndaigona kugadzirisa dambudziko iri dai ndaiva nevaridzi vanoongorora tsvakiridzo."
Muenzaniso wekufananidzira wepurogiramu yevanhu kuverenga ndiyo Galaxy Zoo. Muchirongwa ichi, vanopfuura mazana zana vanozvipira vanotsanangurira mifananidzo yemamiriyoni ane mamiriyoni ane zvakaenzana zvakafanana kare-uye zvishoma-zvishoma nevadzidzi vanoongorora nyeredzi. Iyi yakawanda yakawanda yakapiwa nekubatana kwemasero yakaita kuti zvitsva zvitsva pamusoro pekuti mapoka emarudzi akaumbwa sei, uye yakazova boka rose remajenya rinonzi "Green Peas."
Kunyange zvazvo Giraxy Zoo inogona kutarisa kure nekutsvakurudza kwevanhu, kune mamiriro ezvinhu akawanda apo vatsvakurudzi vezvemagariro vanoda kunyora, kuisa, kana kutora mifananidzo kana magwaro. Mune zvimwe zviitiko, kuongorora uku kunogona kuitwa nemakombiyuta, asi kune mamwe maitiro ekutsvaga ayo akaoma kumakombiyuta asi nyore kuvanhu. Izvo izvi zviri nyore-kune-vanhu asi zvakaoma-zve-makombiyuta michina inogona kutenderera kumapurogiramu ekuverenga kwevanhu.
Handizvo chete microtask muGalaxy Zoo zvikuru, asi chimiro cheprojekti yachowo zvakare. Galaxy Zoo, nemamwe mapurogiramu ekuverengera vanhu, zvinowanzoshandisa kupatsanidza-kushanda-kusanganisa nzira (Wickham 2011) , uye kana iwe unonzwisisa urongwa uhwu uchakwanisa kuushandisa mukugadzirisa zvakawanda zvezvinetso. Kutanga, dambudziko guru rinoparadzaniswa kuva dzakawanda zvedambudziko guru chunks. Zvadaro, basa revanhu rinoshandiswa kune rimwe dambudziko rega rega chunk, zvisingabatanidzi kune dzimwe zvinyorwa. Pakupedzisira, migumisiro yebasa iri yakabatanidzwa kuti iite sarudzo yekubvumirana. Tichifunga izvi, ngationei kuti kupatsanidza-kushanda-kusanganisira nzira yakashandiswa sei muGalaxy Zoo.